မှတ်ဉာဏ်ကဒ် | October 2019
Memory ကတ်များ - ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသိုလှောင်မှုအလတ်စား, အရာမှတဆင့်နောက်ဆုံးသော်လည်းမနိမ့်ဆုံးပါကဖြစ်နိုင်သောကြီးနှင့်မရရှိနိုင်မှတ်တမ်းများပေါ်ပေါက်ရေး။ ယနေ့ကြှနျုပျတို့သင်သည်သင်၏စက်ပစ္စည်းအတွက်ညာဘက်ကဒ်ကိုရွေးချယ်ပါကူညီပေးပါမည်။ ရွေးချယ်ရေးစံအဆိုပါမှတ်ပုံတင်၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်လိုအပ်သော SD က-ကတ်ကတ်ကိုအရေးကြီးလက္ခဏာများ, compatibility (ထောက်ခံပုံစံများ, စံများနှင့်အတန်း၏မြန်နှုန်း) နှင့်ထုတ်လုပ်သူများ၏အသံအတိုးအကျယ်ကဲ့သို့သောအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြသည်။
Memory ကတ်များမကြာခဏရေကြောင်း, စမတ်ဖုန်း, Tablet နှင့်သက်ဆိုင်ရာ slot ကတပ်ဆင်ထားအခြား devices များတွင်တစ်ဦးအပိုဆောင်းသိုလှောင်မှုအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ နှင့်အသုံးပြုသူဒေတာသိုလှောင်ရန်အသုံးပြုနီးပါးမည်သည့်ကိရိယာထိုကဲ့သို့သော drive ကိုဖွင့်ဖြည့်ပါလေ့ရှိတယ်။ ခေတ်သစ်ဂိမ်းအရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်ပုံများ, ဂီတ drive ကိုတစ်ဦးလျှင်အများကြီး gigabytes သိမ်းပိုက်နိုင်။
Samsung က j3 ထဲသို့မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ထည့်သွင်းဖို့ကိုဘယ်လို
ယနေ့စမတ်ဖုန်းအတော်များများ SIM- နဲ့ microSD card တစ်စပ် slot ကတပ်ဆင်ထားကြသည်။ ဒါဟာသင်နှစ်ခု SIM ကဒ်များသို့မဟုတ် mikroSD နှင့်အတူတွဲတဦးတည်း sim card ကိုအတွက် device ကိုထည့်သွင်းခွင့်ပြုပါတယ်။ Samsung က J3 မျှခြွင်းချက်နှင့်လက်တွေ့ connector ကိုပါဝင်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ဖုန်းထဲသို့မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
တခါတလေကင်မရာရုတ်တရက်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုမြင်တာတွေရပ်စဲသောအခါအခြေအနေမျိုးလည်းမရှိ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကဓာတ်ပုံတွေယူမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့ချွတ်ယွင်းခြင်းနှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်သည်အဘယ်အရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။ ကင်မရာ drive ကိုမမြင်ရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရာ၏ကင်မရာ, အကြောင်းရင်းကဒ်ကိုမမွငျပါဘူး, တော်တော်များများရှိစေခြင်းငှါ: အ SD က-card ကိုသော့ခတ်လျက်ရှိ၏ ကင်မရာ၏မတိုက်ဆိုင်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်အသံအတိုးအကျယ်မော်ဒယ်; ကဒ်သို့မဟုတ်ကင်မရာ၏ကျရှုံးခြင်း။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုတွေ့မြင်အဖြစ်ဤပြဿနာကိုအဖြေရှာမပေးနိုငျပါအဘယ်ကြောင့်အနည်းငယ်အကြောင်းရင်းများကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ကွန်ပျူတာသင်အကြောင်းမရှိရှာတွေ့ဖို့လိုပါတယ်, ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုမမွငျပါဘူး။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာတစ်ခု SD ကသို့မဟုတ်သော microSD မြင်ချင်ပါဘူးသောအခါအလုပျဖို့လိုအပျသောခြေလှမ်းများစဉ်းစားပါ။
စံ SD ကမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုသုံးပြီး, miniSD သို့မဟုတ်သော microSD သိသိသာသာအမျိုးမျိုးသော devices များရဲ့ internal storage ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုအခြေခံဖိုင်သိုလှောင်မှုတည်နေရာစေနိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, တစ်ခါတစ်ရံဒီ type ၏သိုလှောင်မှုအမှားအယွင်းများနှင့်ဆုံးရှုံးမှုရှိပါတယ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အချို့ကိစ္စများတွင်သူတို့ဖတ်ရှုခြင်းရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။
မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ပေါ်စမတ်ဖုန်းမှတ်ဉာဏ် switch သည်များအတွက်ညွှန်ကြားချက်များ
ဒါဟာဤကိစ္စတွင်အတွက်ကျနော်တို့အသုံးပြုသူသည်သင်၏ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်တွေနဲ့အစီအစဉ်များသော microSD မှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်ကြောင်းရှိရာအခြေအနေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းသတ်မှတ်ပါတယ်။ အန်းဒရွိုက်တွင်, default configuration ဟာအလိုအလျောက် internal memory မှ loaded သတ်မှတ်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ စတင်, ထို့နောက်တပ်ဆင်ထား applications များ၏လွှဲပြောင်းဘို့အတွက်ရွေးချယ်စရာများထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, - ထိုမှတ်ဉာဏ်ချောင်းကိုရန်နှင့် internal memory ကိုပြောင်းလဲဖို့ဘယ်လို။
အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet SD ကဒ်ကိုမမွငျနိုငျလြှငျလုပ်ဖို့
အခုတော့ကို Android operating system ကိုအပေါ်နီးပါးတိုင်းကိရိယာမှတ်ဉာဏ်ကဒ် (သော microSD) ကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင် device အတွက်သူ့ရဲ့ detection နဲ့ဆက်စပ်ပြဿနာများရှိပါသည်။ သူတို့ကိုအချို့သောထိန်းသိမ်းရေးထွက်သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများ၏အကြောင်းတရားများအများအပြားဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
Internal drives တွေကိုဒီနေ့ရဲ့စမတ်ဖုန်း volumes ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ပြီ, ဒါပေမယ့်ကာ microSD-ကတ်များအားဖြင့်မှတ်ဉာဏ်၏ချဲ့ထွင်၏ထို option ဝယ်လိုအားနေဆဲဖြစ်သည်။ စျေးကွက်မှတ်ဥာဏ်ကတ်များအဲဒီမှာတို့သည်ကြီးစွာသောအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါသည်, နှင့်လက်ျာကိုရွေးချယ်ပါကပထမတစ်ချက်မှာပုံရသည်ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ သင့်ရဲ့ smartphone ကိုအကောင်းဆုံးသင့်လျော်သောအကြည့်ကြရအောင်။
SD က-ကတ်များခရီးဆောင်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအားလုံးကိုအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာကို USB-drives တွေကိုအဖြစ်, သူတို့ကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်နိုင်ဘူးနှင့်ချပ်ဖို့လိုပေမည်။ ဒီအတော်လေးတွေအများကြီးလုပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေ။ ဤဆောင်းပါး၌ငါတို့သည်သူတို့ကိုများ၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးရွေးချယ်ထားကြသည်။ တစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ပုံစံကို SD က-card ကိုမူအရကို format လုပ်နည်းက USB-drives တွေကိုအတူအမှုနှင့်မတူဘဲမဟုတ်ပါဘူး။
အများစုမှာမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်သီချင်းဖွင့်ထောက်ခံပါတယ်။ သို့ရာတွင်ဤကိရိယာများ၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်အမြဲသင်အကြိုက်ဆုံးအပုဒ်တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့မလုံလောက်သေးပါ။ လမ်းထွက်တစ်ခုလုံးကိုဂီတ collection များကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့်တစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်ကဒ်အသုံးပြုမှုလည်းမရှိ။ ထိုသို့ပြုမှမည်သို့ပေါ်တွင်ဖတ်ပါ။
အကယ်စင်စစ်သင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောမှတ်ဥာဏ်ကတ်များတွေအများကြီးမြင်ကြထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိချင်ပါတယ်? ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ကိရိယာ၏ထုတ်လုပ်သူများ၏အစုကိုဒီအမျိုးအစားများ၏သိုလှောင်ရေးကိရိယာဖြစ်ကောင်းအရေးကြီးဆုံးဒေတာရှိပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးတွင်အသေးစိတ်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောမြန်နှုန်းလူတန်းစားအဖြစ်၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုဆွေးနွေးကြပါလိမ့်မယ်။ စတင်ကြစို့!
မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကို format မရနိုငျရှိရာကိစ္စတွင်မှပဲ့ပြင်
မှတ်ဉာဏ်ကဒ် - ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးအပေါ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်သောတစ်လောကလုံး drive တခုဖြစ်တယ်။ ကွန်ပျူတာ, စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်အခြား devices များမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုယူကြဘူးသောအခါမူကားအသုံးပြုသူများအခွအေနမြေားကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ဒေတာကဒ်ကနေချက်ချင်းဖယ်ရှားပစ်ရမည်ဘယ်မှာဖြစ်ပွားမှုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါသင်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်အနေနဲ့အားဖြင့်ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ DVR မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုအသိအမှတ်မပြုပါဘူး
DVR ခေတ်သစ်ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးမဖြစ်မနေ attribute ကဖြစ်လာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများ၏မှတ်ဉာဏ်ကဒ်များကိုအသုံးပြုရန်မှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုအပိုင်းများကို၏သိုလှောင်မှုအဖြစ်ဟင်းချို။ တခါတရံက DVR ကဒ်အသိအမှတျမနိုငျကွောငျးတွေ့ကြုံတတ်၏။ ဒီဖြစ်ပျက်နဲ့ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှအဘယ်ကြောင့်ယနေ့တွင်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
ဒေတာကိုအရှုံး - မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ပေါ်မှာအသုံးပြုသည်အထူးသဖြင့်လျှင်, အဆိုဒီဂျစ်တယ် device အတွက်ဖြစ်ပေါ်ရသောဒုက္ခပြဿနာ။ အဲဒီအစားစိတ်ဓာတ်ကျရညျထကျ, သငျသညျ့ပျောက်ဖိုငျမြားကိုပြန်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အချက်အလက်များ၏ 100% အမြဲပြန်ရောက်မရနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါရန်လိုအပ်ပါသည်တစ်ချိန်ကမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကနေ Data များနှင့်ဓာတ်ပုံများပြန်လည်ထူထောင်။
မကြာခဏအသုံးပြုသူများကင်မရာရဲ့ memory card ကို, ခရီးဆောင်ဂီတကစားသမားသို့မဟုတ်ဖုန်းမှတ်တိုင်များအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိသည်။ ဒါဟာအစ SD က-card ကိုအဲဒီမှာပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမကအခန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် device ကိုအသိအမှတ်ပြုမပေးကြောင်းညွှန်ပြမှားယွင်းမှုတစ်ခုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်လာသည်ကြောင်းဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသိုလှောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်၏ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားသောပြဿနာတရပ်ပိုင်ရှင်တွေဖန်တီးပေးပါတယ်။
မှတ်ဉာဏ်ကဒ်အပေါ် Navitel update ကိုပဲ့ပြင်
ခေတ်သစ်ယာဉ်မောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ခရီးသွားမရှိတော့ GPS စနစ်-အညွှန်း၏အသုံးပြုမှုကိုမပါဘဲသူ့ဟာသူတွေ့ရမယ်။ Navitel ကနေ software ကို - အရှိဆုံးအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ software ကိုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမှာ။ ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် SD က-ကဒ်ပေါ်တွင်ဝန်ဆောင်မှု Navitel ဆော့ဖ်ဝဲကို update လုပ်ဖို့သင်မည်သို့ပြောပြပါ။ မှတ်ဉာဏ်ကဒ်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ် Navitel update ကိုသငျသညျနှစျဦးသည် Modes ယူနိုင်သည် Navitel Navigator Update ကိုရေးစင်တာကို အသုံးပြု. က c သို့မဟုတ်ထို site Navitel အပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲကို update ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာအမှားသည်သင်၏ကဒ်ပိတ်ဆို့ထားပြီးသောကင်မရာကိုအပေါ်မှားအချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ သငျသညျဘာလုပ်ရမှန်းမသိကြသလော ဒီအခြေအနေကိုရိုးရှင်းပြင်ပေး။ ဘယ်လိုကင်မရာပေါ်တွင်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်သော့ဖွင့်ရန်အမှတ်ဉာဏ်ကဒ်သော့ဖွင်၏အခြေခံနည်းလမ်းများကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ Method ကို 1: သင်တစ်ဦး SD ကဒ်ကိုသုံးပါလျှင်, သူတို့သည်မတော်တဆဖျက်တားဆီးဖို့အထူးသော့ခတ် mode ကိုရှိသည်ဟာ့ဒ်ဝဲသော့ခတ် SD ကဒ်ကိုဖယ်ရှားခြင်း။
ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop တစ်ခုမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ချိတ်ဆက်ခြင်း
အခြိနျမှနျမှက PC ကိုရန်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်လာသည်: ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာတစ်ခုသို့မဟုတ်အသံဖမ်း DVR နှင့်အတူဓါတ်ပုံတွေကိုစွန့်လွှတ်။ ယနေ့တွင်ကျွန်တော်တစ်ဦးကို PC သို့မဟုတ် Laptop ကိုချိတ်ဆက်ရန် SD က-ကဒ်အများဆုံးရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေး။ သတိပြုပါရန်သင့်ကွန်ပျူတာပထမဦးဆုံးအရာအတွက်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ချိတ်ဆက်ရန်ကဘယ်လို - လုပ်ငန်းစဉ်ပုံမှန်ချောင်းကိုကွန်နက်ရှင်ကနေအလွန်ကွဲပြားခြားနားဘူး။
သင့်ရဲ့ SD ကဒ်မှ app ကိုရွှေ့
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတိုင်းအသုံးပြုသူကို Android Device များအတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ် devaysa အဆုံးသတ်အကြောင်းဘယ်မှာအခြေအနေမျိုးနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ သငျသညျအတှဲ upgrade ဒါမှမဟုတ်စတိုးဆိုင် Play ကိုစျေးကွက်အသစ် application များ install လုပ်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါမလုံလောက်သောအာကာသအချို့ကိုသင်မီဒီယာဖိုင်သို့မဟုတ် applications များကိုဖျက်ပစ်ချင်သောစစ်ဆင်ရေးပြီးမြောက်ရန်လည်းမရှိကြောင်းအကြောင်းကြားစာပေါ်လာမှာပါ။
https://termotools.com my.termotools.com © မှတ်ဉာဏ်ကဒ် 2019